Umhlahlandlela wokuhamba ngeGorilla e-Afrika uthumela i-COVID-19
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba ZaseRwanda » Umhlahlandlela wokuhamba ngeGorilla e-Afrika uthumela i-COVID-19
Izindaba Ezintsha • Izindaba ZaseCongo • Amasiko • Izindaba • Ukwakha kabusha • Izindaba ZaseRwanda • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izimfihlo Zokuhamba • ezithrendayo Manje • Izindaba zase-Uganda • Izindaba Ezihlukahlukene
Umhlahlandlela wokuhamba ngeGorilla e-Afrika
Ukulandelwa kweGorilla e-Uganda, eRwanda naseCongo kuphephile futhi kwenziwa unyaka wonke. Ohulumeni ababukayo basebenzise izinqubomgomo zezokuvakasha ukwenza ukuhamba kwe-gorilla kuphephe futhi kujabulise.
Akunakho okunye okuhlangenwe nakho okuqhathaniswa nokusukuma-ukusondelana nobuntu nama-gorilla asezintabeni.
I-gorilla safari iletha izihambi nama-gorilla ndawonye ekuhlanganeni okuphefumulelwe futhi okungalibaleki.
Ngaphezu kwama-gorilla uqobo, kukhona konke okuhlangenwe nakho kweholide ngobuhle bemvelo base-Afrika, isimo sezulu esibalele, nemvelo emangalisayo.
Okuhlangenwe nakho kokuhamba nge-gorilla kumayelana nokusondela eduze nama-gorilla asezintabeni asengozini ezindaweni zawo zemvelo. Ukuhamba ngezinyawo kweGorilla kufaka phakathi usesho losuku lonke nokuxhumana nama-gorilla asezintabeni. Ukuhlangana kubuyekezwa njengokuhlangenwe nakho komlingo futhi okumangalisa kakhulu kwezilwane zasendle emhlabeni.
Kube khona umbiko ovamile ovela kubo bonke abahambi abake bahamba ngama-gorilla, bachaza okwenzekile njengokuhamba phambili kukho konke ukuhlangana kwezilwane zasendle. Izihambeli zivuliwe izinkambo ze-gorilla ngizizwe ngikhuthazekile, nginemizwa, futhi ngiyaneliseka ngemuva kokubuka kulawo mehlo ansundu oketshezi kulezi zinkawu ezihlobene nabantu.
Akulona iqiniso: I-Ukraine iyakuphika ukudunwa kwendiza yayo e ...
Izindawo ezihamba phambili ze-US Zokusinda i-Apocalypse yeZombie
Ngubani uNgqongqoshe Wezokuvakasha omusha waseSanta Lucia?
Umkhosi Wamafilimu WaseZanzibar Womhlaba Uya EBoost Island ...
IGlobal Tourism Resilience Centre izibophezele ekululameni ...
I-India Aviation: Izindiza Ezintsha ezintsha ku-Horizon